Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सुनसरीको देवानगन्जबाट पेट्रोल र डिजल भारत तस्करी – Emountain TV
सुनसरीको देवानगन्जबाट पेट्रोल र डिजल भारत तस्करी
सुनसरी, २५ साउन । सुनसरीको देवानगन्ज पेट्रोल र डिजल तस्करीको अखडा बन्दै गएको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोल २२ रुपैयाँ र डिजेल १७ रुपैयाँ महङ्गो छ । जसका कारण सुनसरीको देवानगन्ज पेट्रोल र डिजल तस्करीको अखडा बनिरहेको छ ।
सुनसरीको देवानगन्जमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी भइरहँदा प्रशासनको भने नजर परेको छैन । खुल्ला वोर्डरका कारण पेट्रोल–डिजल भारततर्फ तस्करी भइरहेको छ । देवानगन्जमा दुईवटा पेट्रोलपम्प छन् । ती दुवै पम्पको काम दैनिक भारततर्फ तेल तस्कर गर्नेहरुलाई उपलव्ध गराउनु हो ।
पम्पबाट मोटरसाइकलमा ग्यालिन झुण्ड्याएर प्रशासनकै अगाडी पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी भइरहेको छ । तर प्रशासन मुकदर्शक बनिरहेको छ । नेपाल तर्फका सुरक्षानिकाय यसरी तेल तस्करी हुँदा पनि मौनता साँधेर बसेका छन् ।
पेट्रोलियम तस्करी रोक्न नेपाल आयल निगमको सुनसरी कार्यालयले सिमापारी जाने नेपाली गाडीलाई समेत १५ लिटर मात्र दिने नियम बनाएको छ । तर नियम कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।
व्यापारीहरु भने आफुहरुले तेल ग्राहकलाई बेचेको भन्दै बिक्री भइसकेको तेल कहाँ जान्छ सो विषयमा आफूहरुलाई चाँसो र जानकारी नहुने बताउँछन् ।
आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नवौं स्मृति दिवस, निडर र दुरदर्शि प्रेरणा
अनलाइनमार्फत १० हजार रुपैयाँको सेयर किन्दै प्रधानमन्त्री
रवीन्द्र अधिकारी सवार होलिकोप्टर दुर्घटना छानबिनमा फ्रान्स सहभागी
धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत आवश्यक
विप्लव समूहविरुद्ध आक्रामक भन्दै प्रहरी, नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने अपरेसन
त्रिभुवन पार्ककाे हरिबिजोग : देखियो यस्तो दृश्य (भिडियाेसहित)